DuPont's Ellicott Dredge Sandpiper, Daraasad Dacwada Koronto
Waxaa laga yaabaa 24, 2012
Milkiilaha - EI DuPont de Nemours & Co., USA
Hull Size - dhererka cagaha 165 '
Qoto dheer Qodis 50 '
Cabbirka Cabbitaanka Tuubbada - Aqoonsiga 23 "
Tuujinta Cabbirka Tuubo - Aqoonsiga 23 "
Isugeynta Awoodeed Faras 4800
WARBIXINTA MASHRUUCA DuPont, oo ah shirkadda kiimikada ee horseedka ka ah Mareykanka isla markaana ah soo saaraha ugu weyn adduunka ee titanium dioxide (TiO2), ayaa dhowaan dhameystiray mashruuc malaayiin doolar ah oo lagu ballaarinayo howlaheeda macdanta ee Florida iyadoo la furay goob cusub oo u dhow Maxville. Ellicott cusub® nooca loo yaqaan 'Dredge brand' iyo warshada urursata ee la socota ayaa kordhiyay wax soo saarkooda 50% waxayna kordhin doontaa nolosha miinada sanadka soo socda ee 2010. Mashiinnada ceelasha ayaa ku sii qulqulaya warshad wax soo uruurisa oo sabeysa taas oo kala saarta TiO2 iyo macdano kala duwan oo ka soo baxa ciidda Warshadda ka dib waxay isku soo ururinaysaa isku uruurinta kaydka xeebta waxayna dib ugu soo celinaysaa ciidda aaggii hore ee laga soo saaray. Barnaamijka deegaanka oo si taxaddar leh loo fuliyay wuxuu hubiyaa in aaggii hore loo sii daayay dib loogu soo celiyo intii suurtagal ah xaaladdiisii ​​hore. Mid ka mid ah labadii qadiimiga ahaa ee waaweynaa ee dhowaan ka hawl galayey dhigaalka Trail Ridge ee ku dhow ayaa la xidhay sidii qorshuhu ahaa. Qodista cusub ee "SANDPIPER" waxay soo saartaa labadaba ceelkii hore ee la isku daray.
"SANDPIPER" wuxuu ku guuleystay wax soo saarkeeda naqshadeynta ah 2,100 tan saacaddii intii lagu jiray bishii ugu horreysay ee howlgalka. DuPont wuxuu hada qorsheynayaa inuu balaariyo wax soosaarka 40% ilaa 3000 TPH. Iyada oo wax ka beddello kooban lagu sameeyay, "SANDPIPER" waxaa loo dhisay si ku filan oo lagu daboolo kororka weyn.
Qashin qubka ugu badan ee TiO2 ee Mareykanka.